West Ham waxay bixinaysaa kiro ah £2.5m ee garoonka Olympic Stadium sanadkiiba - BBC Somali
West Ham waxay bixinaysaa kiro ah £2.5m ee garoonka Olympic Stadium sanadkiiba
14 Abriil 2016
West Ham waxay bixin doontaa kiro dhan £2.5m sanadkii garoonka 60,000-kursi leh ee Olympic Stadium, waxaa arrintan la shaaciyay kaddib markii daboolka laga qaaday heshiiska oo dagaal xagga sharciga ah uu ka dhacay.
Milkiilayaasha dhulkaas oo la yiraa, the London Legacy Development Corporation (LLDC), ayaa ka dagaallamay xukun ahaa in qandaraaska heshiiska daboolka laga qaado, laakiin racfaankii ay qaateen ayaa la soo diiday toddobaadkan.
West Ham waxay kiradan bixin doontaa muddo 99-sano ah, sida uu caddeeyay heshiiska oo ka kooban 207-bog.
Naadigu waxay garoonka u guurayaan xilliga kulaylaha ee soo gelaya.
Afarta £4m ee ugu horreysa ee ka imanaysa heshiiska magac bixinta waxaa qaybsanaya LLDC iyo degmada Newham, iyadoo wixii intaas ka badan ay qaybsan doonaan labadaas hay'adood iyo degmada West Ham, inkastoo xaddiga lacagta aan la kordhin karin.
Kirada nus ayaa laga dhimayaa oo waxay noqn doontaa £1.25m haddii West Ham ay hoos u dallacdo oo ay ka harto naadiyada tartanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League.
West Ham waxay sanadkii bixin doontaa lacag dheeraad ah haddii ay horyaalka qaaddo taas oo noqon doonta £1m, haddii ay qaadaan koobka FA waxay bixin doonaan £100,000 sanadkii ama ay u soo baxaan tartanka Yurub ee Europa League, ama £250,000 haddii ay u soo baxaan horyaallada Yurub ee Champions League.
Naadigan waxaa heshiiska kirada ee garoonka oo loo dhisay ciyaarihii olympic-ga ee sanadkii 2012 la guddoonsiiyay sanadkii 2013, waxaana markaas kaddib lagu kharas-gareeyay £272m si loogu beddelo garoon ku habboon tartanka horyaalka Ingiriiska.
West Ham waxay bixisay £15m oo ka mid ah kharash-kaas.